मादकपदार्थ नियमित सेवन गर्नेभन्दा कहिलेकाहीँ पिउनेलाई बढी असर Bizshala -
काठमाण्डौ । के तपाइँ नियमित मादकपदार्थ सेवन गर्नुहुन्छ ? कि कहिले कहिले मात्रै गर्नुहुन्छ ? यदि तपाइँको उत्तर कहिलेकाहीँ पिउँछु र पिएको बेलामा धेरै पिउँछु भन्ने आयो भने त्यो गलत हुनेछ । तर तपाइँको उत्तर नियमित पिउँछु भन्ने आयो भने तुलनात्मक रूपमा तपाइँको बानी ठीक छ भन्ने एक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सर्वेक्षणकर्ताहरूको उक्त प्रतिवेदन युरोपेली हृदयरोग चिकित्सक समाजद्वारा प्रकाशित ‘इपी युरोपेस’ मार्फत् सार्वजनिक भएको हो । अध्ययनका लेखक तथा कोरियाली विश्वविद्यालयका डा जोङ द्वितीय चोइले मादक पदार्थको सेवनको मात्रा र नियमिततालाई केन्द्रित गरेर अध्ययन गरिएको जानकारी दिए ।
मानिसलाई गर्ने क्षतिमा मादक पदार्थको कुल मात्रा वा मादक पदार्थ सेवनको कुल सङ्ख्यामध्ये कुन कुराले मुख्य भूमिका खेल्छ भन्ने दावीसाथ भन्न भने अझै नसकिने विश्लेषण पनि छ । अध्ययनकर्ताहरुले यो सर्वेक्षणमा ९७ लाख ७६ हजार ९ सय ५६ जनालाई सहभागी गराइएको जानकारी दिएका छन् ।
सन् २००९ देखि सुरु भएको अध्ययन सन् २०१७ सम्म चलेको थियो । - रासस/एएनआई
काठमाण्डौ । भारतबाट स्वदेश फर्किने नेपालीहरुको संख्या बढिरहँदा...
काठमाण्डौ। विश्व महामारी कोरोनाभाइरसबाट भारतमा ज्यान गुमाउनेको...
दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो, स्कुलहरु
काठमाण्डौ । दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमणका नयाँ केसहरु देखिएपछि...
काठमाण्डौ । के बालबालिकाले कोरोनाभाइरस फैलाउन सक्छन् ? उनीहरु...
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरसको नयाँ केन्द्रविन्दु बनेको ब्राजिलमा...